यी खानेकुराले गर्छ कोरोनाको लडाईंमा सहयोग, यस्तो छ डाइट प्लान ! – Annapurna Daily
यी खानेकुराले गर्छ कोरोनाको लडाईंमा सहयोग, यस्तो छ डाइट प्लान !
On May 25, 2021 308
काठमाडौँ । कोरोनाको दोस्रो लहर नथामिँदै भारतमा विज्ञले तेस्रो लहरका लागि चेतावनी दिइसकेका छन्। यो घातक संक्रमणसँग जुध्नका लागि शरीरलाई शक्तिवद्र्धक बनाउन अत्यावश्यक भएको छ ।
साथै बिरामीको तीब्र गतिमा निको हुँदा पनि यसले राहत प्रदान गर्नेछ। त्यसैले भारत सरकारले माइगोफइन्डियाको ट्वीटर ह्यान्डलमा सेल्फ आइसोलेशनमा बसेर निको भइरहेका बिरामीका लागि डाइट प्लान सेयर गरेको छ जसले प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गरेर चाँडै निको हुन फाइदा पुर्याउन सक्छ।
१) सेयर गरिएको डाइट प्लानका अनुसार कोभिड–१९ बिरामीले आफ्नो दिनको सुरुवात भिजाएको बदाम र किसमिसमार्फत् गर्नुपर्छ। बदाम प्रोटिन र आइरनको राम्रो स्रोत हो । त्यसैले यसलाई नियमित रुपमा आफ्नो खानामा समावेश गर्नुहोस् ।
२) कोभिड–१९ का बिरामीले ब्रेकफास्टमा ग्लूटेन फ्री डाइटबाट फाइबरयुक्त डाइटको सेवन गर्नुपर्छ । यस्ता डाइटले हाम्रो पाचन क्रियालाई निकै फाइदा पुर्याउने गर्छ ।
३) खाना खाएपछि सख्खर वा घ्यू खान सिफारिस गरिएको छ । तपाईं रोटीसँग सख्खर वा घ्यूको सेवन पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यी दुबै चिजले हाम्रो शरीरभित्र गर्मी पैदा गर्ने काम गर्छ । साथै यसमा प्रतिरोधी क्षमता बढाउने गुणकारी तत्व पनि हुन्छ।
४) बेलुकाको समयमा साधारण खिचडीको सेवन गर्दा नै राम्रो हुन्छ । यसमा ती सबै पोषक तत्व हुन्छ, जसको आवश्यकता हाम्रो शरीरलाई हुन्छ । यसले झाडापखाला लागेको समयमा पनि बिरामीको समस्यालाई कम गर्न सक्छ ।
५) कोरोना संक्रमित हुँदा आफूलाई हाइड्रेट राख्न निकै आवश्यक छ । सादा पानी बाहेक तपाईं घरमा कागती पानी र मोही आदिको पनि नियमित सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । शरीरमा पानीको मात्रा पर्याप्त भएको खण्डमा हाम्रो प्रतिरोधी क्षमता राम्रो हुनेछ ।
६) प्रोटिनयुक्त खानेकुराको सेवन गर्नुहोस् जसले मांसपेशीलाई तीब्र रुपमा निको पार्ने काम गर्छ । तपाईंले कुखुराको मासु, माछा, अण्डा, पनिर, सोयाबिन र बदाम खाने सल्लाह दिइन्छ । यो सबै चिज हाई प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो ।
७) दैनिक पाँच रङको फल वा सागसब्जीको सेवन गर्नुहोस् ताकि शरीरमा पर्याप्त भिटामिन र मिनरल्सको कमी पूरा गर्न सकियोस् । विशेषज्ञका अनुसार हरेक रंगको फल–सब्जीमा भिन्न प्रकारको भिटामिन–मिनरल पाइन्छ ।
८) सेल्फ आइसोलेशनमा केही मानिसहरुलाई स्ट्रेस-एन्जाइटीको समस्या हुनसक्छ। यसका लागि उनीहरुले थोरै मात्रामा डार्क चकलेटको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ जसमा ७० प्रतिशत कोकोओ हुन्छ।
९) आफ्नो प्रतिरोधी बढाउनका लागि तपाईंले नियमित रुपमा बेसार हालेको दुधको सेवन गर्नुपर्छ। बेसारमा पाइने एन्टिबायोटिक तत्व शरीरका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ।
१०) खाना बनाउनका लागि ओखर, बदाम, तोरी वा ओलिभ ओयलको प्रयोग गर्नु राम्रो विकल्प हुनेछ। एजेन्सीको सहयोगमा